Ny dingana voalohany dia asiana marika, ny dingana faharoa dia fivoahana: bokotra famonoana: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Novambra 2019	• 23 Comments
'Ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana any Holandy izay voan'ny gripa dia tokony hanao bokotra mitatitra izany. Izany no ninoan'ny filoham-pirenena Ted van Essen ao amin'ny Dutch Influenza Foundation (NIS). Tena hitondra akora ho an'ny marary, hoy izy. " Ny tatitra RTL News androany. Amin'ity fitondrana ity no nahitantsika ity fitaovan'ny bokotra ity? Tadidinao ve? Ireo dia kintana ireo ary ireo kintana ireo dia nanome toky fa fantatry ny rehetra hoe iza no manalavitra mba tsy ho tratry ny fanafihana. Izao ny ampahany amin'ny tantara dia efa novana diso ary efa fantatsika ankehitriny fa ny mpitarika an'io fitondrana io dia vatsian'ny vondrona izay mbola eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsy antony raha tsy hoe ny ankamaroan'ny mpitondra Nazi dia afaka manao dia lavitra any KLM hanamora ny Printsy Bernhard mankany Arzantina ary tsy antony izany fa ny manam-pahaizana momba ny rocket an'i Hitler Werner von Braun dia notendrena ho talen'ny NASA.
Ny lisitr'ireo mpandeha tamin'izany fotoana izany dia tsy notehirizina, ary tsy mahagaga, tsy misy, ary porofo izany avy eo na tsy farafaharatsiny sarotra aza ny manome, fa amin'ny arisivika voatahiry any Arzantina dia hita tokoa fa misy ny lisitry ny mpandeha any. izay tsy azo ovana ny mamaky azy fa ny tarehimarika mampiady hevitra avy any Alemana Nazi dia nentin'ny KLM avy any Zurich mankany Buenos Aires. Ny anarana toa an'i Bernard Helfrich, mpanao maritrano amin'ny vanim-potoana Nazi, izay mandeha hiasa ho an'i Peron ary mihoatra noho ny fiarahabana ao. Helfrich dia mandeha amin'ny 25 Jolay 1947 miaraka amin'ny fiaramanidina KLM avy any Zurich (izay mitondra ny anaran'i Prince Bernard) mankany Orogoay ary avy ao amin'ny sambo mankany Argentina. Juan Peron dia filohan'ny Arzantina nanomboka tamin'ny 1946. Tsy nanafina ny fangoraham-pony tamin'i Hitler sy Alemana Nazi izy. Tany Arzantina mihitsy aza no nitranga fa ny miaramila Arzantina amin'ny akanjo fanamiana Alemanina dia nanao diabe teny an-dalambe, ary taorian'ny taorian'ny ady dia nankasitraka kokoa tany Argentina ny mpanao heloka bevava. Azon'izy ireo ampiasaina tsara amin'ny fahalalana ara-teknika matetika izy ireo, azo antoka fa ao amin'ny firenena iray izay nanomboka ny fitomboana ara-toekarena, ary ny volany dia tsy azo raisina an-tsaina.
Nanao asa soa sy Netherlands i Netherlands, ohatra, ny indostrian'ny lalamby. Sakaizan'i Peron manokana ny Printsy Bernhard. Tsy misy antony ny hoe Prince Bernhard no namorona ny vondrona Bilderberg ary tsy antony tsy naheno ny tarika fa na ilay ambara Adolf Hitler, dia ny fanjakana emperora lehibe iray. Ireo anarana toa an'i Klaus Barbie, Adolf Eichman, Jozef Mengele, fa koa andriamanitra kely kokoa toa an'i Horst Deckert, Rüdiger Schultz dia noraisina tao Arzantina; Firenena naman'i Bernhard. Ity farany roa koa dia hita ao amin'ny lisitry ny mpandeha KLM hita any Argentina. Ny governemanta amerikanina tamin'izany fotoana izany dia nangataka ny KLM mba hanamarina tsara ny mpandeha azy ireo, satria manana porofo mafy izy ireo fa ny mpitsoa-ponenana Nazi dia miaraka amin'ny KLM hamonjy toerana azo antoka amin'ny alàlan'ny masoivoho fitetezam-paritra any Soisa izay tarihan'ny mpiasan'ny SS taloha. Andeha hodinihintsika fotsiny ny mahamenatra tsara iray hanafenana ny zava-misy fa ireo Nazia rehetra ireo dia tsy raisina an-tsaina. Ny fiakarana sy ny fianjeran'i Adolf Hitler dia nanao fandaharam-potoana fotsiny ary nomanina mialoha mialoha. Natao voalohany indrindra hanomezam-bidy amin'ny trosa trosa, vokatr'izany fa ny vondron'olona marobe nanamaivana ny tarehimarika 6 tapitrisa, dia nahazo sata tsy azo lavina ary fanjakany (ary an-tapitrisany ny fanohanana).
Iza no manao ezaka kely? ivelan'ny rafitry ny tantaran'ny ofisialy mandavaka, mety hahita fa ilay fahamarinana tokana nahare anay hatrany avy amin'ny vavan'i Winston Churchill no teny manaraka: Ny tantara dia nosoratan'ny mpandresy. Any Holandy, izany hoe izay no eritreretintsika fa mahafinaritra dia ny lehibenay no niasa tao amin'ny IG Farben (orinasa an'ity entona malaza ity) ary ny fiarahabana hitler no navoaka tamin'ny fampakaram-bady Juliana sy Bernhard.
Ny tranon'i Lippe, izay andriana holandey Bernhard, dia azo isaina ihany koa (tena isaina, saingy noho ny fahasoavana avy amin'ny dadatoany, Fürst Leopold van Lippe, avy amin'ny 1916 amin'ny maha-andriana) dia nanatevin-daharana ny antoko Nazi. Ao amin'ny asany mahazatra Royals sy ny Reich, andrianan'i Hessen any Alemana Nazi (2006) Tsy maintsy latsaky ny roapolo latsaka ambanin'ny Lippes i Jonathan Petropulous (ary avy eo adinony ny nampidiriny ny Bernhard andriananay mba hanomezana fahafaham-po azy). Miaraka amin'izany, ny lahy sy ny vavy, nizara tsipika maro, dia azo antsoina hoe mpamatsy ho an'ny fiarahamonim-pirenena. Tamin'ny voalohany, tany 1928, dia niditra tao amin'ny NSDAP sy ny SA zanak'olo-mpirahalahy SA Bernhard, Ernst zur Lippe, izay nokasaina hiakatra ny seza fiandrianan'i Lippe. Izy koa no tompon'andraikitra voalohany Erbprinz tamin'ny laharana Nazi.
Ny etsy ambony dia misy ifandraisany amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, na dia eo aza ny mety ho hitanao fa tsy fampidirana ara-tantara tsy nampoizina izany. Miezaka ny hanazava amiko amin'ny mpamaky aho fa tarika vondrona aristokratika izao tontolo izao izay mamorona ny fahavalony manokana ho toy ny alibi mba hahafahan'izy ireo miditra an-tsehatra am-pahavitrihana ary hahatratrarana tanjona lavitra kokoa (jereo ny boky vaovao nataoko). Amin'izany toe-javatra izany, ilaina ny mahita fa ny Ady Lehibe Voalohany dia nampiasaina hamotehana ny Fanjakana Ottoman sy hitahiry ny tany any Palestina ho an'ny fanjakan'ny Isiraely. Napetraka tao amin'ny fanambarana Balfour sy ny fifanarahana Sykes-Picot (jereo eto ny fanazavana). Ny Ady Lehibe Faharoa avy eo dia nanampy ny tsy hisorohana haingana ny firoboroboan'ny fanjakan'ny Isiraely, satria izao tontolo izao dia mankasitraka an'io vondrona nanenjika io. Ao amin'ny 1948, ny fananganana ny fanjakana Isiraely. Hatramin'ny teo dia nitombo tokoa ny herin'i Isiraely ary ny heriny ary afaka hitantsika fa Etazonia dia mpamatsy vola sy mpanohana lehibe indrindra ny israeliana amin'ny fandaniana ny vahoaka Palestiniana. Azonao atao ny milaza fa i Adolf Hitler dia notampian'ilay malahelo ihany koa tamin'ny alàlan'ny herin-kery mitovy hevitra izay nanapoaka azy teo amin'ny toeran'ny fahefany hisolo ny fasim-pifandraisana miaraka amin'ny dikan'ny demokrasia malefaka kokoa.
Tsy tokony ho gaga noho izany, raha ny filazan'ny mpahay tantara maro dia nandany ny fiainany tany Argentina i Adolf Hitler mandra-pahafatiny
Ao amin'ny 1954 ny fametrahana ny vondrona tsiambaratelo tsiambaratelo nataon'ny vondrona Sosialisista (sy freemason) Joseph Retinger sy Prince Bernhard. Ny filankevitra mpitarika dia ahitana an'i Robert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild), John Loudon (NM Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), CL Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (izy no talen'ny CIA), Peter Calvocoressi, Daniel Ellsberg, Andrew Schoenberg (RIIA) ary Henry Kissinger.
Ny fihaonambe tsiambaratelon'ny Bilderbergers voalohany dia nanomboka tamin'ny 29 ka hatrany 31 tamin'ny Mey May 1954 tao amin'ny hotely Bilderberg any Oosterbeek, izay ananan'ny vondrona ny anarany. Ny fandrafetana ny vondrona eropeana eropeana, miaraka amin'ny Vondrona eoropeana vokarina izay avy amin'ny tabilao ataon'ity vondrona Bilderberg ity. Azo lazaina hoe mahavariana fa ny filoha voalohany tao amin'ny Community eoropeana dia mpitondra taloha Nazi. Walter Hallstein dia mpikambana ao amin'ny fiarahamonina "mpiaro ny lalàna", ny fikambanana izay nanjary andry ara-dalàna ho an'ny Eropeana eo ambany fanaraha-maso ny fiaraha-miasa Nazi / cartel. Hallstein dia mpampianatra lalàna sy toekarena ao amin'ny Oniversiten'i Frankfurt, izay misy ny foiben'ny cartelie simika ary IG Farben izay tena mpamatsy vola. Izy dia filohan'ny vaomiera eropeana nanomboka ny 1958 ka hatramin'ny 1967.
Mety ilaina ny mahita hoe mihodina ny haresita ary isika dia miatrika ny sahan'asa mitovy ihany, fa amin'ny palitao hafa. Izay mamatsy vola an'i Hitler ao anaty lasely dia ireo izay mbola eo amin'ny fitondrana. Ny palitaon'ilay pasista feno hatsaram-panahy dia nosoloana ny palitao vaovao miresaka an'i George Orwellian, izay amboarina am-pitiavana izay rehetra fasista. Ny toby fitanana dia antsoina hoe andrim-pitsaboana GGZ; ny toby fanabeazana indray dia antsoina hoe fikarakarana tanora; Ny fanafihana anio dia efa nomanin'ireo mpiasan'ny psikolojia sy manomana lalàna izay manaisotra ny tokonam-baravarana rehetra hamoahana ny olona hiala ao an-tranony. Raha ny fitondrana Hitler dia mandeha am-pahamendrehana amin'ny fomba fasista, milentika tanteraka izao ary ny fanamiana sy ny basy no soloina ny kitapo fitaizana sy ny tsindrona GGZ. Ny marika mazava momba ny fitondran'ny Nazi tamin'ny alàlan'ny Star of David tamin'ny farany dia nisy fiantraikany mifanohitra (ary mety ho natao mangingina):Na inona na inona mahatonga anao ho lasibatra dia manolotra sata tsy mety resy ianao. Saintsaino tsara an'io fanambarana io.
Tao no nisy departemanta fampielezan-kevitra hita maso mazava i Adolf Hitler ary tao no nahitana ny fihetsiketsehana ara-miaramila ny fitondrana, dia tao koa ny kabary vaovao Orwellian. Tsy ao amin'ny warpath ny tafikay; manao ny asan'ny fandriam-pahalemana ny tafikay. Raha ny vatan'ny fiarahamonina rehetra dia mahita ny hafahafa miafina ao anaty palitao mamirapiratra isika. Mbola nisokatra ihany ny fandoroana boky ny Nazia; ny fandoroana boky ankehitriny dia avy amin'ny Ministeran'ny Kasja Ollongren amin'ny alàlan'ny milina sy volom-bolo amin'ny volon-doha izay hevitra rehetra mamitaka. Izay mbola antsoina hoe propagandy ampahibemaso eo ambanin'ny Alemà Nazi dia antsoina hoe fanaovan-gazety ankehitriny. Ny hevitra hoe ny gazety Holandy tenany dia namoaka vaovao sandoka propagandealy be dia be nalaina tamin'ny fananganana tranokala fanoherana avy amin'ny fanjakana, mba hahafahanao manondro ny rantsany namorona ny tena ary hametraka ny sivana, mba hanafoanana avy hatrany ny tsikera tena marina sy mahaleo tena. . Nandeha lavitra kokoa ary nihatsara kokoa noho ny teo aloha izy io, saingy mazava kosa fa ny fantsom-pahefana nanampy an'i Hitler tamin'ny fiakarany; Fantany ihany koa fa ho lavo indray izy rehefa afaka taona vitsivitsy, ary tohizany ny toro lalana mitovy amin'ny fomba tsara kokoa. Marina ve izany sa fiheverana tafahoatra? Tsia, izany dia fomba fijery madio fotsiny ary mampifandray ireo teboka eo amin'ny sary fa tsy mandeha amin'ny blinkers.
Raha eo ambany fitarihan'i Nazi Alemana ny marika mazava ananan'ny tarika amin'ny farany dia misy fiantraikany ratsy tsy azo ihodivirana taorian'ny ady, izao isika dia mahita ny fiverenan'ny fehin-kofehy izany. Mihodina ny zava-drehetra, araky ny 'fitsipahana fanavaozana' nataon'i George Orwell. Ny tolo-kevitr'i Ted van Essen ao amin'ny Fikambanan'i Influenza Holandey, izay mila mitafy bokotra ny mpanome tolotra, dia mampatsiahy antsika ny fitondrana ny 40 / '45. Ilay labeta anefa dia nampiasaina hanaingoana ilay vondrona izay "mila manadio". Amin'izao fotoana izao dia asiana marika ny marika izay tarika "azo fehezina". Ka tena mahita endrika hafahafa ao isika, indray mandeha amin'ny palitao mamy. Ary ny lohahevitra amin'ny vaksiny dia voafantina tsara, satria maro no hahatakatra ny hevitra manaparitaka fa ny vaksiny ihany no tsara ary izay rehetra mandehandeha tsy fanaovana vaksiny dia baomba mandalo valan'aretina. Izahay dia vavolombelon'ny hevitra fasista mifono amin'ny fampielezan-kevitra tena saro-pady, mampiasa ny haino aman-jery hatrany mba hitondrana ny olona hidina an-dàlana mankany amin'ny fomba ekena. Ny haino aman-jery sosialy koa dia manana anjara toerana lehibe amin'io. Ao amin'ny ahy boky vaovao Nohazavaiko ny antony tsy ahafahantsika matoky izany dinika izany amin'ny media sosialy.
Ny fanakianana ny hevitry ny bokotra famonoana dia hoheverin'ny maro ho mampihomehy, satria saika ny mponina manontolo dia namboamboarina niaraka tamin'ny hevitra fa ny fandehanana tsy misy vaksiny dia tena mampidi-doza. Mazava izao fa ny sary misy ny zavamisy eto amin'ity sehatra ity dia marevaka amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny radio sy ny fahitalavitra koa. Ny fomba fijerinay an'izao tontolo izao dia tena arahin'ireo mpitsidika latabatra an'i Jeroen Pauw sy Matthijs van Nieuwkerk na ireo manam-pahaizana manokana ao amin'ny Nieuwsuur. Ny fanakianana dia avy amin'ny zoro mpanohitra mifehy, izay midika fa matetika ny baomba ao ambanin-droa avo na mihintsy ny stigma 'mety' na 'fikaon-doha' no resahina. Nanomboka ny fametrahana marika lehibe (jereo ihany koa ity endrika famantaran-tànana) ary nohodinin'ny miniature miaraka amin'ny soso-kevitra amin'ity bokotra ity. Raha ny zava-misy ahy dia mitaky fahagagana taloha ao anaty palitao vaovao isika. Mifanohitra amin'ny zava-nitranga teo ambanin'ny Alemà Nazi, ny zava-drehetra dia anaty fonon-tena fikolokoloana Orona sy tena ilaina en ampiharina tsikelikely izy io.
Ny hevitra momba ny fanaovana bokotra iray dia maningotra sy mampidi-doza. Izany dia miantoka fa ny olona manana ny heviny momba ny vaksiny dia mety holavina eo am-pandriana ary mety tsy ho afaka hanatanteraka ny asany intsony izy ireo. Izany no fomba malemy kokoa amin'ny fampiharana ny hevitra. Ny fanerena vatana fisainana dia famaritana ny fascisme.
Lisitry ny rohy loharano: relay-of-life.org, trouw.nl
Nahazo lakroa niaraka tamin'ny tandindona Nazi ve ny Regan Hôlanda?
Ny fandravana ny fametrahana ny marika 'marina', Trump, Brexit (ary ny zavatra mifandray amin'izany) dia nanomboka
Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo.
Tags: Afghanistan, bokotra, Alemaina, Essen, Fasisma, Featured, vaccinated, gripa, Kasja, nazia, Nazia, Anarana iombonana, Ollongren, fototra, Ted, vaksiny, dia
10 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 13
Manome fahalalahana daholo ireo marika vaovao ireo, saingy tsy tena mampikorontana ve izany? Nasainay avy amin'ny mpiasa COC Margriet Oosterhuis. Tokony hihomehy izy. "Eny," hoy izy nanamafy, "io dia mampisafotofoto, satria eo amin'ny lafiny iray dia tiantsika ny manala boaty ary etsy an-daniny dia misy takelaka maro kokoa noho ny hatramin'izay."
Mariho Martin Vrijland: ary mazava ho azy fa tsy voasarika amin'ny marika io vondrona io marika io marika io. Ny teny hoe "fahafahana" dia ohatra mahafinaritra iray hafa amin'ny kabary vaovao nataon'i George Orwell. Tsy manome fahalalahana: manana fiantraikany tsy mivantana amin'ny (fahatsapan'ny) fanilihana (tsy fananana).
10 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 28
1 ny mari-pamantarana amin'ity lahatsoratra Trouw ity dia 'pan'.
Topazo maso ny dikan'ny Pan:
Vakio ny bokiko raha ny fanazavana amin'ny antsipiriany ary ny antony maha zava-dehibe io dia tokony hotadidihina.
10 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 32
Alaivo sary an-tsaina fa kely ny dingana avy amin'ny bokotra mankany amin'ny marika nomerika (ohatra: kapila RFID).
Azonao an-tsaina ve ny momba an'izany?
Efa miomana daholo izany ... ampifandraiso ireo teboka
11 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 56
Misy dingana iray hafa eo anelanelan'ny "fiambenana maranitra" sy ny teknolojia 4G / 5G: mizara an-tsitrapo ny toe-pahasalamanao amin'ny orinasa.
Mazava ho azy fa saro-pady ny fiantohana ny toe-pahasalamanao amin'ny fahasalamanao, saingy tsara vintana isika fa afaka mino ny ASR amin'ny masony manga fa hampiasa ireo angon-dresaka ihany izy ireo. Izy ireo dia nametraka BV hafa noho izany antony hitahirizana ny angon-drakitra izany (iza no afaka manazava ny antony hanomezana antoka azy io?). Impiry moa ny Facebook sy Google no nifikitra tamin'ny fanambarana manokana momba ny fiainana manokana?
Fanontaniana tsy mitongilana be dia be avy amin'ny "programa an'ny mpanjifa" momba ny programa ASR Vitality:
12 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 33
vao manomboka fotsiny io, ny entana tsy azo tanterahina avy eo dia mametraka fanafody sy fanafody miaraka amin'ny trackers..See Regina Dugan (DARPA) ary afaka mahalala
12 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 41
Miresaka momba ny synchronicity ...
10 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 36
Fanamarihana bebe kokoa (vakio ny fanonganana tsy ankolafy, vakio: ny fascism amin'ny palitao mamy)
ny tolo-kevitry ny lalàna mpikambana ao amin'ny Raemakers hanovana ny lalàna momba ny fikolokoloana zaza mba hamporisihana ny ray aman-dreny hisafidy eo amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana izay manao na tsy mamela ny ankizy tsy mandray anjara amin'ny fandaharanasa vaksiny nasionaly (35049).
Ny entana manaraka dia ny tolo-dalàna avy amin'ny mpikambana Raemakers hanovana ny lalàna momba ny zaza hamporisika ny ray aman-dreny hisafidy eo amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana izay manao na tsy mamela ny ankizy tsy mandray anjara amin'ny fandaharam-pirazanana ho an'ny nasionaly, Parliamentary Paper 35049.
10 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 12
Fanamarihana: "afaka misafidy ianao" dia ny fitakiana vaovao nataon'i George Orwell ho an'ny hoe "voahilika ianao"
10 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 09
Ny tsiambaratelo lehibe indrindra amin'ny ady lehibe faharoa
angamba angamba ny ankamaroan'ny Nazi tsy manana Aleman / Alemanina.
Raha ny tena izy dia fasimasoana fotsiny ny faneren'ny namana rehetra. Ny fanoherana, ny fifanakalozana fifanakalozana dia voarara. Tsy tokony hisy ny tsy fitovian-kevitra. Eh, isika ve no miresaka ny Netherlands?
10 Novambra 2019 ao amin'ny 17: 56
Kabary vaovaon'ny orwelian? noho io
Ny harena voajanahary dia manerana an'izao tontolo izao (fanjanahan-tany?), Toa mijoro ho an'ny natiora, ha ha ha.
Ny zavatra rehetra nokasihan'ny raibe sy nametraka azy dia fantatrao fa tratran'ny aretina io nefa mbola misy koa olona mijanona ho mpikambana. Raha ny marina, ny bokotra WWF dia tokony hahazo pirinty ny Printsy amin'ny Uniform, dia fantatrao hoe inona no tena izy.
(ary miaraka amin'izay ny fialambolinao tahaka ilay mpanorina voalaza teo aloha dia avy tamin'ny fampiharana, nitifitra rhino's)
10 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 20
Izay efa notorinay sy nitoriantsika teto tety an-tany nandritra ny taona maro dia mihamalalaka hatrany amin'ny habakabaka sy eo an-tsaha hita maso ny ondrin'ny tondradrano miaraka am-bavany. Ankehitriny ny safidy dia ny hanilika na hoentina any an-tsaha vaovao misy fahalalahana hihetsika.
Ary raha ny NAZI dia mbola tsy nialana izy ireo, ny hevi-diso lehibe misy. Ireo izay manana maso hahita izany dia tsy maintsy mijery fotsiny ny Foiben'ny OTAN ao anatin'izany famantarana izany.Aza adino i Martin Bormann, ny tena herin'ny Reich izay afaka miasa tsy misy korontana nandritra ny taona maro tao Paraguay sy ny manodidina. Eny tokoa fa tsy tokony ho gaga fa ny fananana Bushes sy Merkel any Paraguay ary samy mifanolo-bodirindrina aminy ..
10 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 25
Hitler no Zionistana lehibe indrindra nisy tao ...
10 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 57
Ilay horonantsary dia tsy miraharaha ny lainga lehibe indrindra tamin'izany vanimpotoana izany ary tsy raharahany ihany koa fa ny Aleman'i Nazi dia notohanan'ny Zionism avy any Andrefana (UK sy Etazonia) ary ny ra mandriaka malaza tao ambadik'izany. Amin'ny teny hafa: tsy manaja ny Aleman'i Nazi izy fa ilay namorona ny tena-efa-noforonina (fa ny ISIS tany Syria vao namorona ny tena-nahavita azy).
11 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 20
eny, marina izany, nahaliana ahy kokoa ny fifanarahana Haavara miaraka amin'ny judenrat (filankevitra jiosy). Momba ny famatsiam-bola dia manoro ny asan'ny Antony C. Sutton "Wall Street sy ny" Rise of Hitler "aho.
"Ny Hitlerisme dia ahafahantsika mamadika ny firavaka rehetra amin'ny Zionism."
- Nahum Sokolow
11 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 42
11 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 46
Ka raha ny marina dia efa ela daholo
Raha tsy misy ny fahalalana ny taloha, tsy misy fahitana ny zava-misy ankehitriny
11 Novambra 2019 ao amin'ny 08: 00
Boky mahaliana iray nosoratan'i Greg Hallet, mpitsikilo taloha an'i MI6, i Hitler dia mpandraharaha anglisy, noroahina. Tamin'izany fomba izany, Hitler dia tsy ratsy raha miasa toy ny mpitsikilo mandritra ary aorian'ny ny 1e wo. Tsy maintsy ho nanana talenta mpilalao izy.
Ny anglisy dia manana dikany hafa noho ny anglisy!
Eny, namono tena i Hitler. Aza mino izany. Ny ADN kosa tsy hita raha fototry ny "faty" tao Berlin. Ireo setroka sy fitaratra rehetra hamitahana ny sarambabem-bahoaka. Hitler, angamba mpamadika be dia be, izay nametraka an'i Alemana sy ilay tena Alemanina tao anaty olana lehibe. Alemà dia mbola firenena voafandrika nofehezin'i "Alemanina."
Ity môdely fitantanana / famoretana ity dia hita manerana an'i Eropa izay ahitana ny sarambabem-bahoaka amin'ny alàlan'ny 'elite' mpifindra monina ary tsy afaka mivoatra ny tenany sy mamaritra ny ho aviny.
10 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 40
Inona no tsy mety ao anatin'io fo io? Zavatra misy Sedes Sacrorum Schutzen Staffel?
10 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 47
.. tsara koa rehefa sahirana isika hamita ny zavatra rehetra ff 😉
Paraguay amin'ny kodiarana momba ilay voalaza fa miafina hoe 100,000 acre hideaway
11 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 55
Ary eny .. mamaky sy mamaly izy ireo:
11 Novambra 2019 ao amin'ny 11: 32
Ary heveriko fa ny dingana fahatelo dia ny fanaovana sy hizaha toetra ny angon-drakitra ADN. Raha tsara sôsialy sosialista nasionaly, misy ny tsy fanao amin'ny fety fety. Tsy maintsy fantarina ny aretina sy ny singa hafa manelingelina.
11 Novambra 2019 ao amin'ny 11: 49
Amin'ity fisehoana ity tamin'ny martsa 13 2012 any Berlin Dr. Rath ny olona any Alemana sy i Eropa handray andraikitra. Antso iray hiaraha-hanangana ny firenena demokratika eropeana ho an'ny olona sy ny olona - ary siansa ara-pahasalamana vaovao miorina amin'ny fisorohana sy aretina. Ny valin'ny fikarohana ara-tsiansa misy amin'izao fotoana izao momba ny fanafody voajanahary dia mazava fa ny fanafody dia mety hampihena ny aretina ho an'ny daholobe miaraka amin'ny ampahany betsaka. Na izany aza, tsy nomena an'ity 'World tsy misy aretina' ity izahay - satria ireo aretina rehetra ireo dia tsena amina miliara dolara ho an'ny indostrian'ny Pharma. Raha irintsika izao tontolo izao tsy misy aretina ho antsika sy ny zanatsika, dia tsy maintsy miray hina isika. Now!
11 Novambra 2019 ao amin'ny 11: 58
Sambany tamin’ny voalohany.
Salama / madama,
Miaraka aminao ity taratasy ity dia manasa anao aho amin'ny tifitra fanao isan-taona.
Vetivety ny fahazoana ny gripa dia afaka tonga ianao ary afaka maka ny tifitra amin'ny daty sy ora.
Tezitra mafy aho ary nandefa boky nosoratan'i David Icke ny dokoterako miaraka amin'ny fangatahana hanaisotra ny tenako amin'ny rakitra.
3 herinandro lasa izay.
Amin'ny taratasy ity dia manasa anao aho amin'ny tifitra fanao isan-taona
Ary izao aho hiantso azy.
« Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka?
Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman) »
Total visits: 14.836.672
Ny Baiboly dia efa nataony tsy mifandanja amin'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy, fa ny asa dia atao amin'ny CORAN tsy mitovy amin'ny an'ny lahy sy ny vavy
Ny tombotsoan'i Boris Johnson ve no i Nexit? Ny faminaniako ho an'i Eropa
Martin Vrijland op Ny Baiboly dia efa nataony tsy mifandanja amin'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy, fa ny asa dia atao amin'ny CORAN tsy mitovy amin'ny an'ny lahy sy ny vavy